आयुषले भनेः ‘हजुरहरुले हेर्नुपर्छ है ‘मेरो देश’ - HAMRO YATRA
आयुषले भनेः ‘हजुरहरुले हेर्नुपर्छ है ‘मेरो देश’
केवल– लड्ने ! लड्ने !! लड्ने !!! मात्रै, कोही नउठ्ने ?
– वसन्तप्रकाश उपाध्याय
‘मेरो देश’का नायक आयुष रिजालसँग अचानक सुखद् सम्वाद भयो । पढेका–लेखेका र बुझेका आयुष मेरो देशभित्र सचेतना र खबरदारीमा ‘पत्रकार’ बनेका छन् क्यार ! पेशागत धर्म निर्वाह एउटा पाटो हो । तर मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकदेखि पत्रकारिताको सबै पाटोहरु बुझेका आयुषले भने : ‘हामीले हाम्रो देश र भेष बिर्संदै टाउकोमा नक्कली ‘केश’ उमा¥यौं दाजु !’
सिनेमा–संस्कृतिले पात्रलाई प्रवृत्तिगत न्याय दिलाउन ‘नक्कली–कपाल’ खोजेको हो । ‘विग’ लगाएर चिण्डे भुवनले जुल्फीमा नक्कली मुस्कान छरिरहेका छन् । आर्यनले आफ्नोपनको सौन्दर्यमा काइँयो चलाउनै पाएका छैनन् । यो पाटो अर्कैै हो । तर यहाँ त ‘अनुहार–सनुवार’ नचाहिने राजनीतिक दनुवारहरु पनि देशको भेष छाडेर टाउकोमा ‘चमेलीको तेल’ दलिरहेका छन् । अनि आयातीत विदेशीको ‘पफ्र्युम’ छरेर आफ्ना दुर्गन्धलाई लुकाइरहेका छन् ।
सुनिन्छ अनेक कुरा । देखिन्छ धेरै सन्दर्भ । खोरिया फाँडेर खडा गरिएका छन् रंग–तरङ्गका रिसोर्टहरु । नारायणी–गण्डकीका निर्मल जलप्रवाहमा ‘¥याफ्टिङ् विजिनेस’ चलेको चल्यै छ । विडम्बना कहाँ के भयो ? ब्रेकिङ् न्यूज खोज्नेहरु कलम थन्क्याएर ‘तालाबन्दी’मा जुटेका छन् । सबैले जानेको त्यही रहेछ– पहिले अनुशासनको चुकुल नै नलगाएर घरलाई ह्वाङ्ग अरुको साम्राज्य हुन दिने । अनि अर्काको हैकम र अह्रोठपछि लात खाएर मात्रै तालावन्दी गर्ने ?
अनेकौं पेशागत संघ संस्था छन् । कालो कोट लगाएकै भरमा सदस्यता पाइँदैन बारमा । इन्जिनियरिङ एसोसियसनमा लाखौं खर्चे पनि ‘प्रतिनिधि बन्न सकिँदैन । तर दुई थान फोटो बोकेर यसो सिनामंगलतिर किशोर सेकुवा घरमा सेकुवा खान गएकै भरमा ‘प्रेस–प्रतिनिधि र महासंघको सदस्य बन्ने हज्जारौं छन् । हिजो सदस्यता शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर कराउँदा दाह्री कन्ह्याएर बसेका थिए विह्वलहरु । अनि युनियन भन्नु अन्तरपार्टी विग्रहको कुपोषणले ग्रस्त थियो ।
समयअघि आवश्यकीय तयारी नगर्ने । अवसर र सुविधा सधैँ आफैलाई मात्रै चाहिने । ढ्वाङ्ग देख्यो कि लड्नुपर्ने ‘लक्ष्मण सिंह’ मार्काका केही मान्छे छन् यहाँ । अहिले फेरि सुनिएको छ– को–को, के–के मा ‘लड्ने’ रे ! आफू र आफ्ना समूहलाई ‘उठाउने’ समर्पण छैन उनीहरुसँग । केवल– लड्ने ! लड्ने !! लड्ने !!! मात्रै । लड्नु हो आखिर जो लडे पनि हुन्छ । उठ्ने चिन्तन र चासो नदेखाएपछि लड्नेहरुको नालायक लडाई छताछुल्ल देखिने हो आखिर ।
नायक– भाइ आयुषले भनेः ‘हजुरहरुले हेर्नुपर्छ है ‘मेरो देश’ । धेरैवेर जवाफ निस्केन मुखबाट । आयुष आशावादी भएर मलाई हेरिरहेका थिए । म केही बोल्न सकिरहेको थिएन । अनि विस्तारै मैले भनेः ‘पूरै देश र परिवेशलाई हामी पत्रकारहरुले हेर्न सकेनौं भाइ ! सिनेमा नै सही, मेरो देशभित्र तिम्रो पत्रकारको भूमिकालाई हेर्ने कोसिस चाहिँ गरौला है ।’